Maxaa ka baran karnaa argagaxisadii ka dhacdey Norwey?
Dhib markii la qirto ayaa xalkii la heli karaa. Dadka Soomaalida waa in qirsan yihiin dhibka dhacey, isuna qirsan yihiin dhibkey is gaarsiiyeen. Oo na kala diley, na kala gooyay, na kala fageeyay, sumcadeenii Soomaalinimo hal mar baabi`iyay. Hadana waa dullinimo in dhibkaa aan isku maamulno, oo quluub shacab in lagu hanto la doonayo. Maxaa naga qaldan? http://www.ubahaden.com/deris-wanaagii-iyo-dabkii-la-shidey-dagaalkii-sokeeye-ee-soomaaliya/